I-Ellicott Dredges - Izinzuzo Zemisebenzi kanye Nemivuzo
Ikhwalithi nenqubomgomo yezemvelo
Abasebenzi abajabulayo, abaqhutshwa phambili bangukhiye empumelelweni yenkampani yethu, ngakho-ke senza konke okusemandleni ukwenza ukusebenzela u-Ellicott kujabulise.
Sifuna ukuthuthukisa abantu, abaziphonsela inselelo ukuthi benze okuningi, futhi basize isisebenzi ngasinye ukuba sifeze amakhono aso ngendlela eyiqiniso kumanani ethu.
Njengesisebenzi, uma usisiza ukufeza umsebenzi wethu, futhi ukwenze ngendlela eyiqiniso, khona-ke sizokuvuza ngemizamo yakho.
Iphakethe lethu lezinzuzo lifaka:
Umholo wesisekelo wokuncintisana
Ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo
Ukufinyelela ohlelweni lwethu lwempilo
Ikhefu lonyaka elikhokhelwe
Izinketho zokutshala imali ezingama-401k
Ungumnikazi wentuthuko yakho
Sikholwa ukuthi indlela enhle yokusiza abantu ukuthi bachume ngokusebenzisa inhlanganisela yesipiliyoni somsebenzi nokuqeqeshwa okuhlelekile okungahlelekile. Siletha lokhu ngenhlanganisela yomqeqeshi, yokufundisa, nangamaseshini wokuhleleka okuhlelekile.
Ubudlelwano nabaphathi, abeluleki, nabaqeqeshi nabo budlala indima ebaluleke kakhulu. Ngakho-ke, siyaqiniseka ukuthi kunamathuba amaningi ezingxoxo ezivulekile nabasebenzi abangasiza ekubumbeni umsebenzi wakho.